စာရေး ဝါသနာပါသူများအတွက် Samsung Galaxy C9 pro ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး - Myanmar End User
Self ImprovementSocial MediaTech News
By Myanmar End User March 23, 2017 1423 views
Samsung Mobile Myanmar မှ မိမိနေထိုင်ရာ မြို့ကို ဂုဏ်ယူစရာတွေ ဖော်ကြူးပြီး မကြာသေးမှီမှ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Samsung Galaxy C9 pro ကို ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာရေးဝါသနာပါသူများနှင့် မိမိမြို့အကြောင်းကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဖော်ပြလိုသူများအနေနဲ့ ယနေ့ ၂၃ ရက်နေ့မှ စပြီး ၂၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီအတွင်း ရေးသားပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်လိုသူများအနေနဲ့ အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း Samsung Mobile Myanmar ၏ Facebook page သို့ ရေးသား ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Mobile Myanmar ရဲ့ Facebook page လိပ်စာကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မြို့ရဲ့ ဂုုဏ်ယူစရာတွေကိုုဖော်ကြူးပြီး ဆုကြီးရယူရအောင် ပြိုင်ပွဲအတွက် စည်းကမ်းချက်များ
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသူများအနေနဲ့ မိမိတို့ရေးသားထားတဲ့ မိမိတို့မြို့အကြောင်းကို ပြိုင်ပွဲကြေငြာချက် Facebook post ၏ Comment တွင်သော်လည်းကောင်း၊ Samsung Mobile Myanmar Message Box မှတစ်ဆင့် သော်လည်းကောင်း ပေးပိုု့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့မြို့ကိုု အကြီးကျယ် အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ ထင်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုရေးသားဖော်ပြပါ။
ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လိုု့ ထင်တာလဲ?
မိမိမြို့အကြောင်းဖော်ကြူးရေးသားကြသူများထဲမှ အကောင်းဆုံုးရေးသားနိုင်သူတစ်ဦးကို ကံစမ်းမဲနှိုက်ကာ Samsung Galaxy C9 pro ကို ဆုချီးမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီအတွင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၂၅ က်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကျော်မှ ပေးပို့လာသော ပြိုင်ပွဲဝင် စာများကို လက်ခံ စဉ်းစားသွားမှာမဟုုတ်ပါ။
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်တိုု့ပေးပိုု့ထားတဲ့ စာများကိုု Screen shoot ရိုုက်ကာ Bigger Always Better Event Page မှာ တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Event Page Link >>> https://web.facebook.com/events/575028379373426/
မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်သူများထဲမှ အကောင်းဆုံးရေးသားနိုုင်သူများကို စုစည်းပြီး ကံစမ်းမဲနှိုက်ကာ ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကံစမ်းမဲနှိုက်ကံထူးရှင် ရွေးချယ်သည့် အစီအစဉ်ကို Samsung Mobile Myanmar Facebook page တွင် Live ဗီဒီယိုလွှင့်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။
အငြင်းပွားစရာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက Samsung Mobile Myanmar ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Mobile Myanmar
Networking ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Online Video Tutorial များ
By Win Thet Oo May 15, 2019 0
WannaCry Vrius ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ကာကွယ်ဖို့
By Myanmar End User May 15, 2017 0
TELENOR ၏ အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းအစီအစဉ် လျှောက်ထားနိုင်
By Myanmar End User April 25, 2017 0
By Myanmar End User April 24, 2017 0
Web Developer ဆိုတာ ?
October 11, 2017 103594 views